> Resource> ihichapu> esi ọcha Registry na kọmputa
Gịnị bụ ndekọ?
The Windows Registry bụ ebe na draịvụ ike gị ebe Windows na-eme ka ihe ndekọ nke ozi ọ pụrụ ịdị mkpa na-eme n'ọdịnihu, dị ka ọmụma nke arụnyere na programmụ na ọnọdụ, usoro ngwaike, onye ọrụ profaịlụ, wdg
The ndekọ na Windows dị nnọọ mkpa na ị na-agaghị kwesịrị ime ka ntuziaka mgbanwe ya. Na-ekwesịghị ịdị mgbanwe wee na-ejere gị na kọmputa inoperable. Ọbụna na e ọ bụla faịlụ emerụ ruru ka ndekọ njehie, ị kwesịrị ị na-achọ enyemaka nke a Mgbakọ nkwado na-eweta, ma ọ bụ jiri ọkachamara ndekọ Cleaner idozi nsogbu.
Gịnị mere o ji dị mkpa ọcha ahụ ndekọ?
Dị nnọọ ka ihe kwuru n'elu, na ndekọ esetịpụ fọrọ nke nta niile ọmụma banyere ihe nile na kọmputa, ihe gbanwere, ehichapụ ma ọ bụ na-emelite, wdg O mewo ka yiri mgbanwe n'out oge. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ, mgbe ị na-ihichapụ ma ọ bụ iwepụ ụfọdụ omume, ha na-emekarị bụghị ehichapụ kpamkpam na ụfọdụ ntọala ka nọgide na kọmputa. Tinyere oge, a ụdị unattached faịlụ ga-akwakọba ihe na ọzọ, nke nwere ike ịkụda gị na kọmputa. Iji na-kọmputa na-agba ọsọ ngwa ngwa, na ndekọ kwesịrị kpochara elu mgbe nile ka ekpocha cache, kuki, wdg
Olee otú ime ọcha ndekọ na ndekọ Cleaner?
A cluttered Registry nwere ike jiri Windows ka a iri ari, ma nhicha ya n'ụzọ dị irè adịghị mfe. Ruru ka mgbaka nke modifying ndekọ aka na ihe ize ndụ nke na-ewere onye kọmputa na kọmputa ọrụ center, n'ịkpa a ndekọ Cleaner nwere ike ịbụ a mma oke, dị ka Wondershare 1-Click PC Care, nke nwere ike na-akpaghị aka chọpụta na-achọghị, ihe mgbochi ma ọ bụ nanị larịị adabaghị Ndenye na ndekọ redundancy nwere ike ime ka gị usoro ịkụda. Ị na mkpa na-enye ya otu Pịa ịrụ edinam.
N'ezie, nke a 1-Click PC Care kpeworo a kpam kpam nchoputa maka kọmputa gị ịrụ ọrụ, kwụsie ike na nche, nke na-enye gị azụ a kpam kpam dị ọcha PC gburugburu ebe obibi. The 1-Click jụ ọ bụla nkà ọkachamara, adabara ma newbie na geeks.
Idozi Internet Explorer Edemede Error